“चिपक चिपक” गायक प्रेमी भन्छन —अरुले त के के सोध्छन् नि है म त लाजले भुतुक्कै भए - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
“चिपक चिपक” गायक प्रेमी भन्छन —अरुले त के के सोध्छन् नि है म त लाजले भुतुक्कै भए
४ माघ २०७४, बिहीबार १५:०४ 184
बिगत लामो समयदेखी नेपाली संगीत क्षेत्रमा अनबरत लागि परेका गायक , संगीतकार तथा श्रुती संगीत बिद्यालयका संचालक हुन नरहरी प्रेमी
आधुनिक गायनमा सक्रिय नरहरि प्रेमी ‘राज्जा रानी’ सिनेमाकोे गीत ‘चिपक चिपक…’ मार्फत अहिले छाइरहेका छन ।
नरहरि केही युवा म्युजिसियनका गुरुजी पनि हुन । भजन गायक स्वामी नारायणाचार्यका छोरा उनले २०५२ देखि औपचारिक गायन सुरु गरेका हुन । रेडियो नेपालले गरेको ‘राष्ट्रिय फूलबारी सम्मेलन’ मा उत्कृष्ट भएपछि उनलाई काठमाडौं आएर गीत रेकर्ड गर्ने मौका मिलेको थियो । प्रस्तुत छ करिश्मा केसिले गफ गाफका लागि गरेको लभ गफ ।
नरहरी प्रेमीको प्रेमीकाहरु चै कति छन् ?
प्रेमी भएन भने संसार अन्धकार हुन्छ । प्रेमिकाहरु थुप्रै छन् तर कुन अर्थको कस्तो प्रेमिका भन्ने हुन्छ । बिहे भैसक्यो त्यसैले हजुरले सोध्या जस्तो प्रेमिकाहरु छैनन् । मन पराउने त भैहाल्छन् ।
बिहे कति सालमा गर्नुभएको ?
२०५७ सालमा गरेको ।
मागी कि भागी ?
हैन । काँ पार लभ हुनु, सोझो मान्छे म । लभ गरिन हेरे अनि बिहे गरेपछि लभ गरेको ।
भाउजूलाई पहिलो चोटी कहाँ कसरी भेट्नु भयो ?
पहिलो चोटी ससुरालीमै भेटेको । दाजैले लौ केटो बिहे गर्नु पर्छ, अब बिहे नगरेर हुन्न बिहे गरेपछि उम्किन्छ भनेर चितवनको मंगलपूर लिएर जानु भयो । म त बिहे गर्दिन भनेर बसेको थिए दाजै रिसाए बिहे गर्दैनस् भने जे गर्छस् जा जान्छस् जा भने पछि हेर्दैमा के हुन्छ र भनेर हेर्न गए ।
केटि हेर्न भनेर घरमै जाँदाको अनुभव ?
रमाइलो हुँदो रछ । केटिको घरमा पुगेपछि अरु सबैले तलदेखी माथी सम्म हेर्दा रैछन् । ससुरा बुवा, सासु आमा, सालाहरु र अरु छेउछाउकाले मलाई मात्र हेर्ने, मेरोबारेमा थाहा नपाए जसरी कति पढ्या, के जागीर छ भनेर सोधे । केटिले चिया पकाएर ल्याइन् । चिया खाइयो, अनि त्यसपछि मेरो भान्जी ज्वाई उनको नाता पर्ने उहाँले कुरा मिलाएर कोठाभित्र केटिसंग गफ गर्न पठाए । उनी एक्लै कोठामा बसिरहेकी थिइन् म गए ।
बहिर अरु मान्छे भित्र कोठमा एक्लै भाउजूलाई भेट्दा के के गफ भयो ?
म त लाजले भुतुक्कै भएनी । अरुले त के के सोध्छन्नी त है ? मैलेत केही सोध्नै सकिन । अनि के छ भने……अरु त खासै सम्झिन ।
केटि मन पर्यो उनले पनि मलाई मन पराइन् भन्ने कसरी थाहा भयो ?
के छ ? कसो छ भन्दा लजाएर मुसुक्क हाँसेकी थिइन् त्यहीनै होला मन पराको संकेत भन्ने लाग्यो । रमाइलो कुरा त्यतिबेला मलाइत बिहे गर्न मन थिएन त्यसैले मन नपराओस भनेर पुरानो हरियो ज्याकेट लगाएर गएको थिए । हरियो ज्याकेटनै ग्रिन सिग्नल भैदेछ । पछि आफन्तले पनि खबर गर्नुभयो । अनि केटी हेरेको १६ दिन पछि बिहे भयो ।